Qormo Caafimaad oo La Xidhiidha Dhibaatada Macaanka • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
October 25, 2020 | Published by: yaska
In sonkorta dhiiggu ay kor u kacdaa waxa ay ka mid tahay calaamadaha muujiya macaanka, haddii aan la xakamayna waxa ay keentaa khataro caafimaad oo nolosha halis ku ah.
Heerka sonkorta oo kor ku kacdaa waxa ay muujinaysaa in maadadda Gulukoostu ay ku badatay dhiigga. Gulukoostu waa sonkor uu jidhku caadi ahaan u baahan yahay maadaama oo ay tahayu il muhiim ah oo uu ka helo tamarta,
Laakiin dhibaatadu waa in ay heerkeeda dabiiciga ah ka badato. Hormoonnada Insulin iyo Glucagon ayaanay shaqadoodu tahay nidaaminta heerka sonkorta dhiigga,
sida oo kale hormoonnada Adrenaline iyo Cortisol ayaa ka qaybqaata xakamaynta kor u kaca sonkorta dhiigga.
Warbixintan caafimaad oo lagu faafiyey shabakadda Aljazeera ayaa sheegaysa in dadka macaanka noociisa koowaad qabaa ay dhibaatadoodu tahay hormoonka Insulin oo ku yar jidhkooda,
Laakiin dadka macaanka nooca labaad qaba jidhkoodu waa uu samaynayaa xaddi ku filan oo hormoonka Insulin ah, laakiin dhibaatada haysataa ay tahay awooddii Gulukoostu ku gaadhi lahayd Unugyada oo aan jirin.
Labada xaaladood ee aynu xusnayba waxaa kor u kaca heerka sonkorta dhiigga waxa aanay dhaawac xun gaadhsiisaa neerfayaasha, Indhaha, keliyaha iyo xididdada dhiigga.
Haddaba dadka qaba macaanka noociisa koowaad waxaa waajib ah in ay helaan dawo ah maadadda Insulin, mana jiro hab kale oo ay ku xakamayn karaan kicitaanka sonkorta.
Laakiin dadka macaanka noociisa labaad qaba waxaa jira habab ay sonkorta dhiggooda ku yarayn karaan, oo lagaba yaabo in ay mararka qaarkood dawo ka maarmi karaan.
Iyada oo ay marwalba waajib tahay in bukaanku uu dhakhtar la tashato inta aanu isticmaali dawo macaan ah iyo marka uu isticmaalo kaddib, wax kasta oo uu dawo ahaan u isticmaalayana ay tahay in uu dhakhtarka kala tashado.
Hababka ugu fiican ee bukaanka macaanku ay ku dhimi karaan heerka sonkorta dhiigga waxaa ka mid ah:
Iska jir qulubka
Qulubka iyo culayska nafsiga ahi waxa ay kordhiyaan heerka hormoonka Cortisol oo isaga iyo hormoonno kale oo uu ka mid yahay Glucagon ay keenaan in ay kor u kacdo heerka sonkortu. Haddaba haddii aad xaaladahan nafsiga ah isku aragto naftaada kula dagaal xasiloonida,
Sida oo kale samee jimicsi maalinlew ah. In qofku uu hurdu ku filan seexdo ayaa iyaduna kaalin muhiim ah ka ciyaarta dejinta xaaladahan nafsiga ah. Cilmibaadhiso kala duwan ayaa caddeeyey in hurdo yaraantu ay kor u qaaddo hormoonnada keena diiqadda iyo qulubka.
Cuntooyinka leh Kaarboohaydarayt ka
Cuntooyinka hodanka ku ah Karboohaydaraytku waxa ay si dhaqso ah kor ugu qaadaan heerka sonkorta dhiigga, sidaas awgeed qofka qaba macaanka waxaa lagula talinayaa in aanu cunin cuntooyinkan.
Waxa aanay dhakhaatiirtu kula talinayaan cuntooyinka ay ku yar tahay Kaarboohaydaraytka oo ay ka mid yihiin cuntada badarka / firiga ah ee ay Soomaalidu waddaniga u taqaanno, sida qamandiga, digirta iwm, iyo sida oo kale khudaarta.
Cuntooyinka ay dhakhaatiirtu dadka macaanka noocyadiisa leh uga digayaan waxaa ka mid ah Daqiiqada cad iyo cuntooyinka ay ku jirto sonkortu.
Bukaanka qaba macaanka noociisa labaad, talada ugu mudan ee ay dhakhaatiirtu siinayaan waa in uu miisaank dhimi, haddii uu miisaankiisu inta dabiiciga ah ka badan yahay. Mar kasta oo uu miisaanka qofku kordho,
Waxaa kordhaya xaddiga uu jidhkiisu uga baahan yahay hormoonka ‘Insulin’ halka mar kasta oo uu miisaanku yaraado ay hoos u dhacdo heerka sonkorta dhiiggu.
Dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in guusha ugu fiican ee miisaan dhimistu ay tahay in qofku uu muddo lix bilood illaa hal sano ah ku dhimi boqolkiiba 5 miisaankiisa. Taas oo ay sheegeen in ay tahay bar bilow fiican oo uu qofku halkaas hoos uga sii wadi karo miisaanka.
In dufan iyo iidaan xoolaad ay cunrtadu lahaataa waxa ay u fiican tahay caafimaadka, laakiin dufanka oo ku bataa waxa ay keentaa khataro caafimaadka.
Sidaas awgeed talada ugu fiicani waa in qofku ka dheeraado dufanka badan iyo gaar ahaan dufanka xoolaha, sida xaydha iyo baruurta,
Maadaama oo dufankani sababo in jidhku uu iska caabbiyo maadadda Insulin ee uu u baahan yahay. Waxa ay xeeldheereyaashu ku talinayaan in la cuno cuntooyinka leh asiidhada dufanka ah, sida dufanka Kalluunka.
Cabbitaannada ay ku badantahay sonkortu sida sharaabka khudradda laga miiraa waxa ay ka qaybqaataan in sonkorta dhiiggu ay korodho. Laakiin cabitaannada ay ka mid yihiin shaaha guud ahaan iyo gaar ahaan shaadhka cagaaran waxa ay dejiyaan sonkorta waana ay u fiican yihiin dadka macaanka qaba. Waxa uun muhiim ah in sonkor aan lagu darin.
Qofku marka uu jimicsanayo muruqyadu waxa ay qabtaan shaqo ka badan inta ka badan marka uu qofku shaqo caadiya qabanayo, taasina waxa ay kordhisaa tamarta ay isticmaalayaan oo dabcan iyaduna gubaysa sonkorta ku jirta dhiigga.
Maadaama oo uu jimicsigu gubayo Guluukoos badan hoosna u dhigayo heerka macaanka jidhka ku jira,
Sida oo kalana caawinayo dhimista miisaanka waxa ay khubaradu ku talinayaan in jimicsi joogto ah oo ku habboon ay joogto u sameeyaan bukaanka macaanku.
Dadka aan hore u caadaysan jimicsiga waxa ay xeeldheereyaashu kula talinayaan in bilowgaba aanay jimicsiga ku talaxtegin, tusaale ahaan ha ku bilaabaan socod masaafad yar ah, kaddibna ay si yaryar hadba in ugu kordhiyaan.
Qorofalku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka ugu waxtarka badan dhinaca dhimista sonkorta dhiigga. Qorofalka oo si joogto ah loo isticmaalaa waxa ay yaraysaa sonkorta dhiigga,
Laakiin waxaa waajib ah qofka macaanka qabaa inta aanu Qorafalka ama dawo kale oo kasta oo dhaqan ah isticmaalin in uu la tashado dhakhtar takhausus ah, iyo in aanu iskii wax ka beddel ama joojin ugu samayn dawada dhakhtarku u qoro.
Qaabka qorofalka loo isticmaalayaa waa in lagu darsado shaaha ama bunka, sida kale waxaa lagu dhex daro karaa saldaatada cuntada la raaciyo.
Jimciyadda Jarmalka ee bukaanka macaanka ayaa ku talinaysa in qofka macaanka qabaa uu xaddi yar ka isrticmaalo khudradda leh macaanka, sida muuska iyo cinabka, waxa aanay ku talinayaan khudradda ay sonkortu ku yartahay ee uu tufaaxu ka midka yahay.
Saacaddii Halgamaadii Hindia Mahatma Gaandi Oo Lagu Xaraashay Lacag Aad u Badan
Saacad kuwa jeebka ah oo “duug ah oo jajabtay” oo uu lahaan jiray Mahatma Gandhi ayaa lagu xaraashay £12,000. Saacadan…
Kalgacaylku Waa Qani Caashaqa ka Qaro wayn,, Qormo Jacayl.oo aad u Xiiso Badan
Waa ay dhacdaa in xidhiidh guur ku dambeeyaa uu ku bilowdo deymo iyo aragtida koowaad, laakiin waxa marar badan dhacda…
Nuxurka Hadalladii laga jeediyay hadhimo sharafeed hoggaanka xisbiga Waddani ku maamuusay xulka gobolka Daadmadheedh
Nuxurka Hadalladii laga jeediyay hadhimo sharafeed hoggaanka xisbiga Waddani ku maamuusay xulka gobolka Daadmadheedh. …
Soomaaliya oo Midowga Yurub ka dalbatay dardar-gelinta Mashruuc Liddi ku ah Madax-bannaanida dhuleed ee Somaliland
Muqdisho (OWN)- Hawl-galka Midowga Yurub ee Soomaaliya (European Mission Somalia), ayaa dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kala…
Madaxweyne Hore oo Muqdisho ka dhex-qarxiyey Heerka Cadaawadda uu Farmaajo u hayo Somaliland iyo Jallaafooyin uu dhigay
Muqdisho (OWN)- Madaxweynihii hore ee Maamul-goboleedka Galmudug ee Soomaaliya, xilligana ah guddoomiyaha xisbiga Sahan, ayaa war uu ka soo saaray…
Maxaad kala Socotaa Musxafka Quraanka Kariinka ah ee Lagu Qoray Dhiigii Madaxwaynihii hore Ee Ciraaq Saddaam Xuseen
kitaab Qur’aanka kariimka ah, gacanta ayaa lagu qoray, Khadka ku qoranina waa dhiiggii madaxweynihii la dilay ee Ciraaq Saddaam…
Maxaad ka ogtahay Taariikhdii uu Cumar Carte Qaalib Dheeraa Siyaasiyiinta kale ee Soomaalida?
Hargeysa (OWN)- Allah ha u naxariistee waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday Marxuum Cumar Carte Qaalib oo ahaa siyaasi si…
Daawo: Waa Kuma Tababaraha Ka Dambeeyay Koobkii Ay Qaadeen Xulka Gobolka Daad-Madheedh
Daawo: Waa Kuma Tababaraha Ka Dambeeyay Koobkii Ay Qaadeen Xulka Gobolka Daad-Madheedh. …
Jaaliyada Reer Burco ee Sweden oo Fariin Kulul u Direy Maamulka Gobolka Togdheer Taagereyna Ciyaartoyga
Jaaliyada Reer Burco ee Sweden oo Fariin Kulul u Direy Maamulka Gobolka Togdheer Taagereyna Ciyaartoyga,…
Daawo Saliidda Kalluunka Indha-tooshlaha Laga miiro iyo Dawada laga helo
Daawo Saliidda Kalluunka Indha-tooshlaha Laga miiro iyo Dawada laga helo…
Saadaashii Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee JSL ee Guusha Gobolka Daad-madheedh oo Rumoowday
Saadaashii Gudoomiyaha Baanka Dhexe ee JSL ee Guusha Gobolka Daad-madheedh oo Rumoowday , halkan hoose ka daawo …